XOG:- Xilliga rasmiga ah ee laga yaabo inay ku dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Xilliga rasmiga ah ee laga yaabo inay ku dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya
Ilo lagu kalsoonaan karo oo ku dhaw guddiga doorashada dadban ee dalka Soomaaliya ayaa inoo sheegay in laga yaabo in muddo 15 ilaa 30 maalmood ah dib loo dhigo waqtiga loo qabtay xilliga doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Guddiga doorashada dadban ayaa la sheegayaa inay diyaariyeen qorshe ay doonayaan inay wax ka bedel ku sameeyaan jadwalkii doorashada 2016-ka, gaar ahaan xilliga madaxweynaha Soomaaliya, kaas oo hore loo qorsheeyay inay dhacdo 30-ka bisha October ee sanadkaan.
Sidoo kale, waxaa maalmaha soo socdo la filayaa in guddiga doorashada dadban uu shaaciyo dib u dhigista xilliga ay dhici doonto doorashadda xilka madaxweynaha Soomaaliya, kahor shir gaar ah oo ay dhamaadka bishaan golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ka yeelan doonaan arrimaha Soomaaliya.
Ilaha aynu heleyno ayaa sidoo kale sheegaya in xilliga doorashadda madaxweynaha Soomaaliya laga dhigi doonno 30-ka bisha November ee sanadkaan 2016-ka, iyadoona arrintan ay keeni karto inay ka hor yimaadaan beesha caaalamka iyo golaha ammaanka oo hore digniino uga soo saaray in dib loo dhigo xilliga doorashadda.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan ayaa wal-wal aad u xoogan ka muujiyay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo sheegay inay ka cabsi qabaan in doorashada 2016-ka ay noqoto mid jiitanta oo ugu dambeyn lagu shubto.